My Pride Ifoto Contest
Abaqhagamshelwa kunye nentengiso
Yabelana Ukufuna iposi
Iipatata sesinye sezona zipho zibalaseleyo kwihlabathi lanamhlanje elifunyenwe kubemi bamandulo beAndes. Kwilizwe labo, ezi perennials zimelwa ziintlobo ngeentlobo zobume, uhlobo, umbala kunye nokunambitheka okuya kumangaza umfokazi. Bangeniswa ngabaseSpain kwiYurophu. Ukukhula phantsi komhlaba, izipho zendalo ekubhekiswa kuzo ziphezulu kwi-carbohydrate kwaye zineeprotein, iiminerali (ngakumbi i-potassium) kunye neevithamini, kubandakanya ne-Vitamin C. Namhlanje, iitapile ziloyisile ilizwe, kwaye ubukho bazo kwikhitshi nganye kufuneka. Bayakhawuleza kwaye kulula ukulungiselela. Zinencasa zombini ziphekwe kwaye zivuthwe okanye zithosiwe. Nangona kunjalo, izimvo ezikhoyo zeetapile ezifakwe endaweni ethile. Apha siza kukhankanya kuphela eminye imifanekiso enokubakho, kodwa imida yokudibanisa ukunambitheka ingasetwa kuphela ngumbono. Ngokutya inyama, ubisi, iqanda, imifuno okanye izinto ezihlangeneyo, ezi "apile zomhlaba" (ngesiFrentshi - "pomme de terre"; isi-Hebrew - תפוח) ה) zombini zilula kwaye zingumceli mngeni ocekeceke ngobuchule.
Iimveliso eziyimfuneko zizambane, itshizi, isoseji, amaqanda, iparsley, iminquma, ibhotolo, imifuno kunye nokunye okongeza okumnandi kuwe.
Uhlamba kakuhle kwaye ubhaka okanye ubilise iitapile, ulumkele ukungaphaya kobushushu. Kuxhomekeka kudidi, ubungakanani kunye nembono yakho, unokugqiba ngento omele uyenze ngokulandelayo. Kwiitapile ezinkulu, zisike kwisiqingatha kwaye uxobe isiqingatha ngasinye. Ngcamla kwaye ugcobe ngebhotela okanye ioli yomnquma. Beka izinto kwaye ubhaka ehovini esemgangathweni. Ungasebenzisa isiseko esingumngxunya njengesepha yokuxhasa xa ukhonza, okanye udibanise nezinye izinto zokubhaka uze ubhake okanye ufefe ngokwakho. Ukuba uneetapile ezincinci kodwa ufuna iqanda ekugcwalisweni, ungahlulahlula i-yolk yeqanda. Iprotheyini ixutywe nenxalenye efihliweyo kunye neemveliso ezongeziweyo, eziphekiweyo kunye neefolokhwe zenyama ephekiweyo ziyaphekwa, kwaye i-yolk ibhakwa ngenxalenye ephambili.
Enye indlela kukusika isiciko kuphela. Xa ukrola uya kufumana isokisi yamazambane apho kunokudityaniswa ngendlela eyahlukileyo. Ngale ndlela, unokusebenzela izitya ezininzi ezinambithekayo ngokuhamba nje okukodwa. Ukuba unomdla wokusebenzisa inyama okanye imifuno efuna unyango olude, kuyacetyiswa ukuba uzilungiselele kwangaphambili. Olu luvo lukhetho olufanelekileyo lokusebenzisa imihlaba emincinci yeemveliso ezingakweneliyo ukuzenzela.